Elungiselelweyo Service - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Izixhobo zomnyango zinempembelelo ebalulekileyo kuphuhliso lwexesha elizayo labenzi beminyango. Umthengisi olungileyo wesisombululo somnyango kufuneka angabi nakho ukubonelela abavelisi beminyango ngokuthenga okukodwa kweenkqubo zehardware ezipheleleyo, kodwa babe nakho ukusebenzisana nophuhliso lwemveliso yabenzi beminyango kwaye babonelele ngokunyanzeliswa okubalulekileyo kuphuhliso lwemveliso yabenzi beminyango. . Ngale ndlela, ayinakonga kuphela iindleko zexesha kunye neendleko zabasebenzi zabenzi beminyango xa bethenga, kodwa ikwakhuthaza uphando kunye namandla okuphucula abenzi beminyango.
Ukuphendula kwiimfuno zabavelisi beminyango zabathengisi bezisombululo zeminyango, i-YALIS, njengomthengisi wobuchule besisombululo somnyango, sele ithumele imveliso yayo kunye nolwakhiwo lwenkampani ukuhlangabezana neemfuno zabavelisi beminyango.
I-YALIS iqale ukuseka ngokuthe ngcembe iqela layo le-R & D ekuqaleni kokusekwa kwayo. Okwangoku, iqela le-Y & R le-YALIS linenjineli yoomatshini, injineli yenkqubo kunye nabayili bembonakalo, abanokuhlangabezana neemfuno zabathengi ezifana nokuphuculwa kobume bemveliso, uyilo lwembonakalo, kunye nemisebenzi ethile yobugcisa. Ayisiyiyo loo nto kuphela, i-YALIS inefektri yayo, enokuthi ibonelele ngenkonzo yenyathelo elinye kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo, ukuprinta kwe-3D, ukukhula komngundo, uvavanyo lwesikhunta, ukuveliswa kwetyala, kunye nemveliso emininzi, ukunciphisa iindleko zonxibelelwano kuphuhliso lwemveliso entsha ukuya kwimveliso yobuninzi , kunye nokwenza intsebenziswano ngokusondeleyo.
Ukongeza kubuchule obenziwe ngokwezifiso, i-YALIS ikongeze umgca wemveliso yezixhobo zeminyango, ezinje ngeziciko zokumisa ucango, iihenjisi zomnyango, njl., Ukuhlangabezana neemfuno zabavelisi beminyango. Ukuze ucango lungabinako ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi kuphela, kodwa luqwalasele nobuhle bomnyango. Kwaye ngenxa yokuba i-YALIS ibonelela ngokuthenga inyathelo elinye kwizixhobo zomnyango, igcina ixesha kunye nomzamo wokuthenga ezinye izixhobo zecango ezivela kwabanye abathengisi bomzi-mveliso.
Amava obuchule kwiNkonzo yoMenzi woMnyango
Ukusukela oko i-YALIS igqibe ngobuchule bayo bokuqinisa intsebenziswano kunye nabavelisi beminyango ngo-2018, yongeze iqela lenkonzo yomenzi kwiqela labo abathengisayo, abazinikele ekulandeleni abavelisi beminyango ukuphucula inkonzo kubenzi beminyango kunye nokusombulula iingxaki zabo kwangexesha. Kwimveliso, i-YALIS yazisa ngenkqubo yolawulo lwemveliso ye-ISO kunye nezixhobo zemveliso ezizenzekelayo ukwandisa amandla emveliso kunye nokuqinisekisa ukubanakho kokuhambisa.
I-YALIS ngumthengisi wesisombululo sehardware esinamava angaphezulu kweminyaka eli-10, amava aso atyebileyo kunye nobuchule bobuchule, anokunceda ngokufanelekileyo abavelisi beminyango ukuba baphuhle kwaye benze inkqubela phambili kunye.